Maqaallada ku saabsan Ireland
Maxay yihiin shuruudaha fiisada Ireland?
February 7, 2021 Maitri Jha Ireland, fiisada
Marabtaa inaad u safarto Ireland? Waxaad u baahan doontaa fiiso arrintaas. Ireland waa meel fasax lagu qaato. Sannad walba dalxiisayaal badan ayaa booqda Ireland. Mucjisooyinka dabiiciga ah sida Cliffs of Moher waxay soo jiitaan dalxiisayaasha ka imanaya daafaha
Dalbashada Magangalyada Ireland? Waa tan sharaxaad kooban !!
Waxaa laga yaabaa 12, 2020 Shubham Sharma Ireland, qaxootiga
Ma waxaad sii joogi doontaa Ireland mise waxaad dooneysaa inaad magangelyo ka hesho Ireland? Waxaa jira dukumiintiyo gaar ah oo aad u baahan tahay inaad sidato inta aad codsaneyso magangelyo. Mid ayaa dalban kara magangelyo kaliya haddii aad joogtid Ireland. Ireland waa